Fuze, bhatiri kesi uye headphone jack kune yako iPhone 7 | IPhone nhau
Fuze, bhatiri kesi uye headphone jack kune yako iPhone 7
Chimwe chezvinhu zvinokakavara chinosanganisirwa neiyo iPhone 7 uye 7 Plus ndicho chimwe chinhu chaisina, iyo headphone jack. Apple yatora nhanho umo kuziva kuti hapana chinogoneka kuchinjika, uye yakafunga kuita isina chinongedzo chave nesu kweanopfuura makore zana uye "yekupedzisira" yekupedzisira iyo yaingova shanduko muhukuru yakaitika makore 100 apfuura . Kubheja kuri pachena, ramangwana harina waya mahedhifoni, asi kune vazhinji vashandisi vasingade kutora nhanho iyi uye vari kuda kuenderera vachishandisa mahedhifoni mahedhifoni, izvo zvinovatadzisa kugona kubhadharisa iyo iPhone panguva imwe chete kunze kwekunge ivo vanoshandisa yakakura adapta. Iyo nyowani Fue butiro inogadzirisa dambudziko iri nekubatanidza kubatanidza Jack uye zvakare inotipa isu mamwe maawa ekuzvimiririra, kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe..
Fuze chirongwa chave kutowanikwa paIndiegogo uye icho chatove chakapfuura chidiki kuti chive chaicho. Iyo bhatiri kesi, yakafanana chaizvo neiyo yatovepo pamusika, asi iine peculiarity: iyo inosanganisira yehephonephone jack kuti ikwanise kushandisa ako aunofarira pasina matambudziko, uye zvakare inokusiya iwe usunungure Mheni yekubatanidza kana iwe uchida kuchaja kana kuwiriranisa mudziyo wako panguva imwe chete. Inowanikwa mumarudzi akasiyana siyana (chena, grey, bhuruu, pinki uye goridhe), kesi yacho inogadzirwa nezvinhu zvakafanana neiyo Apple bhatiri kesi, saka ichapawo dziviriro huru kune yedu iPhone, uye zvakare Inosanganisira bhatiri rinotibvumidza recharge chishandiso: 2400 mAh mune iyo iPhone 7 kesi uye 3600 mAh yenyaya yakagadzirirwa iyo iPhone 7 Plus.
Fuze akato kwanisa kukwidza mari inodiwa kuti igadziriswe, uye sekureva kwevagadziri vayo nyaya iyi inofanirwa kusvika kune avo vakapinda mumushandirapamwe nguva yeKisimusi isati yasvika, naZvita 23. Mutengo wako Yakatanga pamadhora makumi mana nemasere, asi iwo mauniti akatotengeswa, uye ikozvino unogona kungovawana kubva pamadhora 49, hazvina basa neruvara kana iri iPhone 69 kana yeiyo 7 Plus.. Iwe unogona kutora chikamu mumushandirapamwe kubva kune yepamutemo Indiegogo peji pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Fuze, bhatiri kesi uye headphone jack kune yako iPhone 7
10k Mumhanyi mahara kwenguva shoma
Twitch Prime, ruzivo rwese nezve sevhisi nyowani